Lahatsoratra 94 009 amin’ny teny malagasy
Ny Baiboly dia boky inoan'ny Kristiana sy ny Jiosy fa Soratra Masina mirakitra ny tenin' Andriamanitra. Ny Baibolin'ny Jiosy na Baiboly hebreo, izay tsy ahitana afa-tsy ny Testamenta Taloha, dia atao hoe Tanakh. Mizara roa lehibe ny Baiboly kristiana ka ny fizaràna voalohany, izay fitambaran'ireo boky voasoratra talohan'i Jesoa Kristy, dia atao hoe Testamenta Taloha, fa ny fizaràna faharoa kosa, izay fitambaran'ireo boky voasoratra taorian'ny nahaterahan'i Jesoa Kristy, dia atao hoe Testamenta Vaovao. Ny fiangonana tsirairay dia mety hampiditra amin'ny fomba samy hafa ny boky ao amin'ny Baiboly.
Ny teny hoe Baiboly dia avy amin'ny fanononana amin'ny teny anglisy ny hoe Bible, izay avy amin'ny teny latina hoe Biblia. Io indray dia avy amin'ny teny grika hoe βιβλία / biblía, teny milaza maro avy amin'ny hoe βιβλίον / biblíon izay midika hoe "boky". Amin'ny heviny voalohany, ny Baiboly izany dia fitambaram-boky maro.
Ny Baiboly hebreo na ny Tanakh (hebreo: תנ"ך) dia voasoratra amin’ny teny hebreo izay ahitana andalana sasany voasoratra amin’ny teny arameana (na aramianina na aramaika). Ny Baiboly hebreo araka ny kanona masoretika dia hafa satria manasokajy ireo boky ireo ho telo: dia ny Lalàna (hebreo: תּוֹרָה / Torah) sy ny Mpaminany (hebreo: נְבִיאִים / Nevi'im) ary ny Soratra (hebreo: כְּתוּבִים / Ketuvim).
Ny Samaritana izay atao hoe koa Israelita Samaritana dia vahoaka vitsy milaza ny tenany ho taranak’ireo Israelita fahiny, monina ao Israely sy Sisjordania. Atao hoe samaritanisma idraindray ny anaran’ny fivavahana arahiny. Ny Jiosy anefa dia mihevitra azy ireo ho taranak’olona tsy Israelita tao amin'ny mpijirika Asiriana tamin’ny Andro Taloha izay nandray dikan-teny tsy ara-dalànan’ny Baiboly hebreo raha mitaha amin’ny finoan’ny Jiosy. (tohiny...)
alakamisy androany andro mahery io andro io izay olona teraka androany dia vitana mpanjaka vitana mpanakarena.